Iphrinta ye-A3 Small T-Shirt China Manufacturer
Incazelo:Umshini wephrinta we-T-Shirt,Iphrinta ye-A3 Small Shirt,Iphrinta ye-T Shirt encane
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > Iphrinta ye-A3 Small T-Shirt
I-Model No.: RF-A3 T180711
Iphrinta ye-A3 Small T-Shirt Imisebenzi eminingi: Multi-Function (ngokusebenzisa inkino ehlukile): ukuphrinta isithombe, incwadi, umklamo we-logo kumkhiqizo ongakapheli 33 * 43cm noma 33 * 60cm usayizi. Inkino ye-Textile: phrinta kwi-t shirt. Inkino edlayo: ukuphrinta kokudla okudliwayo okufana nekhekhe, ushokoledi, ikhukhi, i-candy, i-macaroon njll. Uhlelo oluqhubekayo lwe-Ink Supply - 100ml Individual, i-cartridge enkulu yokugcwalisa - gcwalisa inamba encane noma ayikho isidingo sokushintsha amashadidi. I-software ekhethekile yokuphrinta i-RIP, ukufeza ubungani obukhulu nokuphambene okukhulu. Isistimu yokulawula ukuphakama kwe-infrared ray, i- auto-induction kanye nokuvinjelwa kokuphakama kwezinto, ukuvikela ikhanda lokuphrinta kusuka emthethweni ngento ephrintiwe. Le Mshini wephrinta ye-T-Shirt isebenzisa ubuchwepheshe bokufaka inkinobho yangempela, finyelela ukunyathelisa okuphezulu okucacile. Kulula kakhulu ukusebenza futhi usayizi omncane, kulula ukuthwala.
Uma kuqhathaniswa nekhono lokunyathelisa lendabuko, i-RFC digital flatbed A3 Small T Shirt Printer ikusiza ukuba ulondoloze ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa ukushisa nokushisa izinqubo ezenziwe zendabuko, okwenza kube lula ukunciphisa umbala wenkinobho yendabuko, lo mkhakha uthola ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa izindleko zabasebenzi, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephezulu efinyeleleke ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka, okungahambisani nokuqeda, ngaphandle kokwenza ipuleti, inkululeko yombala, ukunyathelisa okukodwa kanye nezinye izici ukusheshisa inqubo yedijithali embonini yokunyathelisa, ukukhiqiza okukhulu okuphelele nokukhiqiza isevisi ye-100% emva kokuthengisa.
Iphrinta ye-T Shirt encane
Umshini wephrinta we-T-Shirt Iphrinta ye-A3 Small Shirt Iphrinta ye-T Shirt encane Umshini wephrinta we-T-shirt Umshini wokuprinta we-A3 T-Shirt Umshini wephrinta weTile Umshini wephrinta weThetile Umshini wephrinta we-Latte